Fivoriambe COY 15: tanora miatrika ny fiovan’ny toetr’andro | NewsMada
Fivoriambe COY 15: tanora miatrika ny fiovan’ny toetr’andro
Ny 22 hatramin’ny 24 novambra 2019 teo, ny Fivoriamben’ny tanora eto an-toerana, andiany faha-15 (Coy15). Nifanakalo hevitra sy nifampizara vaovao izy ireo momba ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro any amin’ny faritra misy azy ireo. “Fahitana an’i Madagasikara haharitra rahampitso », lohahevitra nofaritan’ny Réseau climat Océan Indien, tambajotra mpanadihady momba ny toetr’andro.
Nisokatra ho an’ny rehetra ny andro voalohany, nijoroana vavolombelona ho an’izay afaka manadio ny tontolo iainana. Tanora dimy avy amina fikambanana samihafa nilaza ny fiarovan’izy ireo ny tontolo iainana, fotoana nahafahana nampahafantatra ihany koa tamin’ny rehetra ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny vahaolana hiatrehana izany.
« Efa anatin’ny fandaharanasan’ny skoto izao momba ny tontolo iainana izao. Ny fandraisanay anjara tamin’iny Coy iny, nizarana sy nampianarana ny tanora mitovy fijery aminay ny amin’ny fiarovana ny zavaboahary. Taorian’iny telo andro iny, mpitondra teny izahay eo anivon’ny fiaraha-monina, manana ny mahomby hiatrehana ny ady atao amin’ny fiovan’ny toetr’andro », hoy i Vetsoniaina Fenosoa Nathalie, mpikambana ao amin’ny Fanilo.
Azon’ny tanora malagasy ny manararaotra ny fandraisana anjara tamin’iny Coy iny hiatrehan’izy ireo amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro, mametraka fiaraha-monina tsara alain-tahaka ho Madagasikara maharitra. Fanombohana iny fivoriana iny, mpitarika hisian’ny fiovana tsara momba ny toetr’andro eto amin’ny firenena ireo tanora ireo.